Lalàna ny ZES
Afaka telo andro no ho tonga ny bileta tokana vao nohafaran’ny Ceni. Miisa 10.300.000 izany ankoatra ny bileta tokana hanaovan’ny kandidà roa fampielezan-kevitra ka hozaraina amin’izy ireo tsy ho ela.
Maika amin`ny fandaniana ny lalàna ny ZES na Faritra ara-toekarena manokana ny depiote Mahazoasy Freddie satria zava-dehibe ho an`ny fiainam-pirenena amin`ny fampandrosoana fa tsy hoe « Fivarotan-tanindrazana » ary azo taterina eto izany araka ny fanazavany.
Nohamafisiny fa tokony hijery akaiky an`io lalana io amin`izay ny HCC fa andrasan`ny fampandrosoan`ity firenena ity izany. Nilaza iihany koa ity filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena fa manomboka anio ny volavolam-pandaharana (adoption de l`ordre du jour) amin`ity fihaonana tsy ara-potoana ity.